DEG DEG:- Madaxweyne Farmaajo oo daqiiqado kahor gaaray magaalada Cadaado – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Madaxweyne Farmaajo oo daqiiqado kahor gaaray magaalada Cadaado
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa daqiiqado kahor gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo oo ka kooban wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Cadaado kusoo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo mas’uuliyin kale.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa inay ka qeyb galaan munaasabada xafladda caleemo saarka madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo haatan si toos ah uga bilaabatay magaalada Cadaado.
Sidoo kale, xafladdaasi ayaa waxaa ka qeyb-galaya qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka, wakiilada beesha caalamka iyo mas’uuliyiin kale.
Ammaanka goobta ay xafladda ka socoto ayaa ah mid si aad ah loo adkeeyay, waxaana la xiray dhammaan waddooyinka soo gala goobta ay xafladdu ka socoto.
Waa safarkii ugu horeeyay uu madaxweyne Farmaajo ku tago magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, tan iyo markii xilka loo doortay 8-da bisha Febraayo ee 2017-ka.